वि.सं. २०७५ वैशाख १० गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अप्रिल २३ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > वि.सं. २०७५ वैशाख १० गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अप्रिल २३ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस
भोलि तपाई अत्याधिक भावुक रहनु हुने देखिन्छ भने भोलि तपाईमा निर्णय गर्ने क्षमताको समेत कमि रहन सक्ला। भोलि तपाईलाई माताको स्वास्थ्यले सताउने देखिन्छ। भोलि स्थायी सम्पत्तिको अवस्थामा कुनै निर्णय गर्न उचित छैन। व्यवसाय साथै जागिर स्थलमा स्त्री वर्ग देखि पूर्ण रुपले सावधान रहनु पर्ने देखिन्छ।
भोलि तपाई शरीरक साथै मानसिक रुपले स्वस्थ महसुस गर्नु हुने देखिन्छ भने भोलि तपाईलाई आर्थिक रुपमा पनि सफलता मिल्न सक्ला। कलाको क्षत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउनु हुने तपाई प्रत्येक कार्यमा सफलता पाउनुहुने। भोलि वितिय योजना बनाउँदा भने सजक रहनु होला। विश्वासघात हुने देखिन्छ।
भोलि तपाईको सम्पूर्ण आर्थिक आयोजना सफल हुने देखिन्छ भने मिस्ठान्न भोजन समेत प्राप्त रहन सक्ला। मध्यान्न पछी अध्ययनमा सफलता मिल्न खासै गार्हो नपर्ने देखिन्छ। मित्रहरूसँग भेटघाटमा खुशी मिल्न सक्ला। भोलि व्यापारको अनुकूल वातावरण हुनेछ। आय वृद्धि हुनेछ। साथै कानुनी कार्य समेत सफल हुन सक्ला ।
भोलि तपाई भावनामा बहानाले तपाईको आर्थीक कार्यमा रुकावट आउने देखिन्छ। मानसिक तनाव बढेर जाने आजको दिनमा तपाईलाई परिवारका सदस्यहरुबाट खासै सहयोग नमिल्ने देखिन्छ। स्वादिष्ट खाना र यात्राको समेत सम्भावना रहेको आजको दिनमा तपाईलाई कानुनी कार्यमा सफलता नमिल्ने देखिन्छ।
भोलि तपाईमा भौतिक र मानसिक विकार बढेर जाने देखिन्छ भने भोलि तपाईलाई शारीरिक समस्या समेत रहन सक्ला। भोलि तपाईले निर्णय गर्दा हतार गर्नु भएमा ठुलो घाटा व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ। भोलि अदालतको मामलामा सावधान रहनु पर्ला भने भोलि तपाईले आफ्नो सामाजिक छविमा समेत ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ।
आजको दिनमा तपाईलाई विभिन्न प्रकारको लाभ मिल्न सक्ने देखिन्छ। भोलि तपाईको वैदेशिक यात्रा सफल हुन सक्ला। साथै भोलि तपाईलाई साथी-संगीबाट उपहार समेत मिल्न सक्ला। जागिरेहरुको भोलि पदोन्नतिको योग रहेको छ। दाम्पत्य जीवनमा आनन्द र सन्तुष्टिको पल रहन सक्ला। भोलि तपाईको धार्मिक कार्यमा समेत खर्च बढ्न सक्ला
आजको दिनमा तपाईको नयाँ आर्थिक योजना बन्ने देखिन्छ भने भोलि तपाईलाई नयाँ व्यवसाय शुरु गर्नको आर्थिक सहयोग मिल्ने देखिन्छ। आय वृद्धि योग रहेको आजको दिनमा तपाईलाई अचल सम्पत्ति सम्बन्धि कार्यमा सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। गृह सजावटको कार्य समेत हुने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई स्वास्थ्यले पनि साथ दिने देखिन्छ।
भोलि तपाईको ठुली व्यक्तिहरुसंग हुने मतभेदका कारण आर्थिक घाटा पुग्ने देखिन्छ। अत्यधिक सोचको कारण मानसिक विकारको अनुभव गर्नुहुनेछ। पेटमा समस्याहरु आउने देखिन्छ। भोलि विद्यार्थीहरूको लागि लाभदायक दिन हो। आजको समय यात्राको लागि उपयुक्त छैन। मान्-सम्मानमा ध्यान दिनुहोला ।आज बोलीमा नियन्त्रण राख्नु होला।
भोलि तपाई अचल सम्पत्ति किन्दा संयम रहनु पर्ने देखिन्छ भने भोलि धातु सम्बन्धि कारोबारमा समेत ध्यान दिनु होला। भोलि तपाईको राजनैतिक जीवन पनि खासै उपलब्धिमुलक नहुने देखिन्छ। चिसो र खाँटीको कारणले गर्दा तपाईंको स्वास्थ्य प्रभावित हुनेछ। मानसिक चिन्ता अनुभव हुनेछ। अचानक धन खर्च हुने देखिन्छ।
भोलि तपाईमा तन-मनबाटनै स्फूर्ति बढेर जाने देखिन्छ भने भोलि तपाईले सोच्नु भए अनुरुपनै सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई विदेशबाट शुसमाचार समेत मिल्ने देखिन्छ। अज तपाईको पहिला नउठेको धन समेत उठ्न सक्ला। भोलि सामाजिक कार्यमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। धर्ममा अस्थ बढेर जाने देखिन्छ।
भोलि तपाईको यश, कीर्ति र सफलता बढ्न सक्ला। साथै भोलि भावना र व्यवहारमा मेल नहुँदा भने दुख मिल्न सक्ला। भोलि यात्रा गर्दा संयम रहनु पर्ने देखिन्छ। भोलि धेरै समय भेट नभएका व्यक्तिसंग भाते हुँदा मन आनन्दित रहन सक्ला। काममा साथीले सहयोग गर्नेछन्। पैसा उचित काममा खर्च गरिनेछ।
भोलि तपाईको रचनाको क्षत्रमा रुची बढेर जाने देखिन्छ भने भोलि तपाईलाई साहित्यको क्षत्रमा सुधार हुने दिन परेको छ। शेयर-सट्टामा लाभ मिल्ने आजको दिनमा तपाईको अरुको विश्वास जित्न सफल रहनु हुने दिन परेको छ। भोलि तपाई विपरित लिंगी प्रति अत्यधिक आकर्सित रहनु हुने देखिन्छ भने भोलि तपाईलाई प्रेम जीवनमा सफलता मिल्न सक्ला
देशकाे आधा जति संक्रमित त काठमाण्डाै उपत्यकामै थपिए…
कोरोना सङ्क्रमित ६ मध्ये तीन जना एउटै जहाजबाट नेपाल आएको पुष्टि